Zvesimba - KingHOOD Gaseous System Co., Ltd.
KingHOOD Gaseous System ari kutsvakurudza uye kuvandudzwa yepamusorosoro zvebhizimisi uye mubasa kushanda VPSA okisijeni michina. Kuvimba nenyanzvi zvazvakanakira, kambani ane kwazvo utariri chikwata, anewo Hardware zvakakwana zvivako uye ruzivo nounyanzvi chikwata. The akakwana maitiro uye anonzwisisa utariri chendangariro kambani zvatinokwanisa muupenyu. KingHOOD ari akazvipira ose VPSA tsvakurudzo okisijeni midziyo uye kukura, magadzirirwo, kugadzira, Sales, basa ukama, dzichipa hwokugadzira zano uye mhinduro.
KinHOOD pamwe anotevera vaitungamirira emakambani munyika yokukurukura:
1, Enterprise yevanhu upfumi
Huru Vanotarisira uye michina vashandi pamusoro KingHOOD vose kushanda gasi midziyo indasitiri kupfuura makore 10, vose vane zvakawanda nyanzvi ruzivo. Kwenguva refu, isu muchidimbu mune tsika rimwe divi, kuburikidza hwokugadzira mainjiniya panzvimbo kushanya, kuwana dambudziko, uye kuvandudza unyanzvi zvakare uye zvakare. Panguva iyoyowo, tichiri omerera indasitiri michina, nemafungiro yemhando ruzivo.
2, Design & pakugadzira vanokwanisa
mainjiniya kwedu resposible vose magadzirirwo uye vanodhirowa kuti kugadzirwa yedu. We beleivev kuti michina yemhando yepamusoro ndiyo chinoumba nokuda yekambani suatainable kukura. Uyezve, KinHOOD anoramba vaonane vaikudzwa emakambani munyika yokukurukura, riri kukurumidza inzira kuvandudzwa zvigadzirwa. Kuburikidza adpoting ari world'd kutungamirira zvemichina makambani akadai Bayer, Tosoh, pamwe Chinese Academy of Science, South China University of Technology, Haicheng Technology nevamwe kwesayenzi dzakabatana. Uyewo kuburikidza pachako midziyo mashandiro zvinyorwa, zvose izvi zvinhu kutungamirira KingHOOD midziyo rave yayo nemamwe features, unyanzvi hwokugadzira zvinhu zvavo ia nguva dzose achitungamirira indasitiri. Sewevhu samolecular nomusero kuti kugadzwa, kugovera mhepo aibuda, kuvandudzika ari kudzora mamiriro, hurongwa configuration, hombe gasi wedzerai hurongwa, etc. KingHOOD kwakaita kuramba kushanda itsva michina vari kutsigira kukura mabikirwo indasitiri panguva iyoyowo.
Excellent magadzirirwo anofanira kuvimba zvakaisvonaka mukugadzira chinzvimbo. Tine kukwanisa kugadzira uye kugadzira zvakakwana zvokushandisa. KingHOOD vane chaiwo samolecular nomusero fekitari, ano maindasitiri workshop, bhizimisi akangwara sehofisi uye nyanzvi kugadzwa mabasa chikwata.
3, Quality uye Service
unhu Equipment uye basa kunokosha zvikuru kuti kambani yacho survial, uye chinoita kuti kukura. Tinobvumirana kunyatsoteerera unhu zvakanaka, tinoedza kuvandudza pamusoro-nzvimbo basa. We akuteerere midziyo 's nokutumwa, midziyo debugging, basa mafungiro uye mutengi kugutsikana, tinoita rekodhi mushure - basa rekodhi ose mutengi. Ticharamba varonge personnels kuti contactcustomer norunhare, Fax, email uye-nzvimbo kushanya. Kuziva midziyo achimhanya chinzvimbo, rubatsiro uye kutungamirira mutengi kuramba midziyo, kuyeuchidza vatengi nenguva kutsiva kupembedza nhengo. Tinotenda, kutsanya uye nyanzvi basa redu rinoita achaita yedu vatengi ose vanoziva basa redu hanya.
Clients Name nharaunda kunyoresa chinzvimbo
Yunnan mari Forsetry And Pulp Yunnan 10 matani Pulp bleaching 360Nm 3/ h
Chenming Grou (Jinlin) Jilin okisijeni delignification 700Nm 3/ h
Tiger Forest & Paper Group Hunan 8 matani Pulp bleaching 350Nm 3/ h
ChiTianhua Paper Guizhou 20 matani Bamboo Pulp bleaching 1400Nm 3/ h
Shaowuzhongzhu Fujian 4,5 matani Bamboo Pulp bleaching 400Nm 3/ h
Huaihua Juntai Hunan 40 matani Pulp bleaching 2000Nm 3/ h
Lee Man Paper chigayo Chongqing 12 matani Pulp bleaching 500Nm 3/ h
Fengli Paper Mill Hunan 5 matani Pulp bleaching 200Nm 3/ h
Yongfeng Paper Mill Sichuan 12 matani Pulp bleaching 700Nm 3/ h
Haisum Michina Vhetinamu 10 matani Pulp bleaching 400Nm 3/ h
Chenming boka Shandong 15 matani Pulp bleaching 600Nm 3/ h
Danhua boka Jiangsu Enviroment kuchengetedzwa 500Nm 3/ h
HSIK Wang Shan Twinking Star Hunan Okisijeni -enriched utsotso 2000Nm 3/ h
Qingdao Taiwan Fiber Glass Shangdong Glass simbi chitofu Kwezvokudya Nemiti -fuel 1750Nm 3/ h
Huajin bepa Jiangxi 10 matani Pulp bleaching 600Nm 3/ h
Zhenxing bepa Liaoning 12 matani Pulp bleaching 700Nm 3/ h
Haisum SKD Project Bhangiradheshi Enviroment kuchengetedzwa 150Nm 3/ h
Laishan pulp chigayo Sichuan Bamboo Pulp bleaching 380Nm 3/ h
Kediweijing Guangdong Glass simbi chitofu Kwezvokudya Nemiti yemwoyo 400 Numbers 3/ h
Zhuji Paper chigayo Guangdong Pulp bleaching 350Nm 3/ h
Xingchangsheng Jiangsu chiwanikwa simbi 250Nm 3/ h
Wanjing Technology Mayanima Kuzadza chiteshi nokuda kwokuparadza (3 nemhando) 50Nm 3/ h
Suzhou zhong Modhekai Angora Kuzadza chiteshi nokuda kwokuparadza (2 nemhando) 50Nm 3/ h
Suzhou zhonghua Mozambiki Kuzadza chiteshi nokuda kwokuparadza (2 nemhando) 50Nm 3/ h
Shuangdeng bepa Mill Jiangsu Pulp bleaching 240Nm 3/ h
SFI Marazhiya Enviroment kuchengetedzwa 600Nm 3/ h
Xinhui mhangura Xinjiang Copper simbi 1000Nm 3/ h
Shandong Fiber girazi boka Shangdong Glass simbi chitofu 3250Nm 3/ h
Quanlin bepa Shangdong Pulp bleaching 3000Nm 3/ h
Luyang Shangdong Okisijeni zvakapfumisa combusation 500Nm 3/ h
Wuliangye Group Sichuan Glass simbi chitofu 150Nm 3/ h
Jnshan mushonga Indrusty Hanan Okisijeni zvakapfumisa gasi zvokuita 800Nm3 / h
Longmang utsotso Sichuan simbi 2500Nm 3/ h
Changhai boka Jiangsu Glass simbi chitofu 1300Nm 3/ h
Junlin mishonga Hebei Pharmaceutical Chemicals 500Nm 3/ h
Xingbang International Rashiya Pulp bleaching 500Nm 3/ h
Shandong Fiber Glass Shangdong Glass simbi chitofu 1400Nm 3/ h
Jiali Gas Jinagxi Glass simbi chitofu 1800Nm 3/ h
Huabei Jingmao Gansu okisijeni yemwoyo 6000Nm 3/ h
Zvishavane utsotso Mengu okisijeni yemwoyo 4000Nm 3/ h
Huabo Lead indasitiri Anhui Lead simbi 3000Nm 3/ h
Shandong Fiber Glass Shangdong Glass simbi chitofu 2800Nm 3/ h
Jinhong Gas Shangdong Glass simbi chitofu 3850Nm 3/ h
Maolian Technology Tianjin Copper simbi 3334Nm 3/ h
inhong Gas Shangdong Glass simbi chitofu 2600Nm 3/ h
Dexing Lead Industry Jiangxi Lead simbi 2000Nm 3/ h
Gansu Huayi Gansu Lead simbi 1300Nm 3/ h
Jiangsu Jihua Jiangsu Wastewater kurapwa 2200Nm 3/ h
Shengshihuayuan Guangdong Ozone jenareta 130Nm3 / h
Beijingguodian Guizhou Ozone jenareta 300Nm3 / h
Qianrunkaiyuan Beijign Ozone jenareta 100Nm3 / h
Qianrunkaiyuan Shandong Ozone jenareta 30 * 2Nm3 / h
Fujain Newland Gas Tianjin Maolian Chian Railway Construction Group CO., LTD Jilin Zambia Congo Ozone jenareta Copper simbiCopper simbi 1120Nm3 / h 4000Nm3 / h 5000Nm3 / h